“Garsooruhu wuxuu doonaayey inuu i siiyo kaarka digniinta, waana wax aan la aqbali karin” – Lionel Messi – Gool FM
“Garsooruhu wuxuu doonaayey inuu i siiyo kaarka digniinta, waana wax aan la aqbali karin” – Lionel Messi
Haaruun April 6, 2021
(Barcelona) 06 Abriil 2021. Kabtanka Kooxda Barcelona ee Lionel Messi ayaa ku qasbanaaday inuu si taxaddar leh u wajaho naadiga Real Valladolid kulankii xalay ee horyaalka La Liga.
Xiddiga reer Argentina ayaa ogaa in haddii loo taago kaarka digniinta uu ka maqnaan doono kulanka El Clasico ee isbuuca soo socda ay kooxdiisu wajahayso Real Madrid, waxaana uu ka walwalsanaa in kaarka jaalaha uu yimaado qeybta hore ciyaartii xalay.
Cabashooyinka Messi markii uu garoonka ka baxayay waqtigii nasashada waxa uu ku sigtay in kaarka jaallaha ah la tuso sida uu warinayo warsidaha Movistar +.
Yeelkeede, Kabtanka Leo ayaa afka furtay: “Garsooruhu wuxuu doonaayey inuu i siiyo kaarka digniinta, waana wax aan la aqbali karin.” Lionel Messi ayaa la maqlay isagoo sidaa u sheegaya wakiilka kooxda ee Carles Naval.
Barcelona ayaa ugu danbeyntii ku guuleysatay ciyaarta 1-0, kaddib markii Real Valladolid ay kaarka cas qaatay isla markaana ku ciyaaraysay 10 ciyaaryahan qeybtii labaad.
Horudhac: Real Madrid vs Liverpool, Man City vs Dortmund & Xaqiiqooyinka aad uga baahan tahay lugta hore ee siddeed dhammaadka Champions League
Inter Milan oo ku soo biirtay tartanka loogu jiro saxiixa xiddig ka tirsan Kooxda Liverpool